Ihe ndị Dubai na-eme & Emeghị | Nke a bụ ụfọdụ ị ga-eburu n'uche mgbe ị na-eleta UAE
Ị na-aga Dubai? Mara yays & ee
Kwa afọ ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-eleta UAE, karịsịa Dubai. Ụfọdụ na-aga ebe a ịchọ ọrụ, ebe ụfọdụ na-abịa ezumike. Ndị mmadụ na-arọ nrọ ileta Dubai; ala a anabatala ndị si n'akụkụ ụwa niile n'afọ ndị a niile. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịga Dubai maka ebumnuche ọ bụla bụ, enwere ihe ole na ole ị kwesịrị ịma tupu ị bịarute ebe a.
Ndị Dubai na-eme amara, na-ele ọbịa, na nkwanye ùgwù, ọ bụ ebe mara mma ileta. N'ịbụ ndị na-ekwu na ọ bụ obodo Islam, mana ha na-agbaso iwu na-anabataghị. A na-atụ anya ka ndị ọbịa nwee nkwanye ùgwù maka mmetụta omenala ha. A ghaghị iburu n'uche ihe ụfọdụ n'ihe gbasara koodu ejiji na omume na ị ga-enwe oge magburu onwe ya. Sọpụrụ iwu na ụkpụrụ nke obodo na ọnụnọ gị ga-abụ ihe na-atọ ụtọ nke ukwuu.
Nke a bụ ụfọdụ Eme na Emeghị ihe ị ga-eburu n'uche mgbe ị na-aga Dubai.
Uwe - Dị obi umeala n'uwe gị, ọkachasị na mpaghara nchekwa na ebe ọha. A na-anabata uwe igwu mmiri n'akụkụ osimiri nkeonwe yana ọdọ mmiri. E kwesịghị iyi uwe igwu mmiri n'ebe ọ bụla ọzọ n'èzí osimiri, ogige mmiri, ma ọ bụ ọdọ mmiri. Shorts na T-shirts na-adabara uwe n'ọtụtụ ebe ọha na eze. Ọ dị mma ka ikpuchi ubu, ogwe aka, na ụkwụ mgbe ị na-eleta ụlọ alakụba, akụkụ ochie nke obodo na ebe okpukperechi. Ụmụnwaanyị kwesịrị iji akwa mkpuchi kpuchie isi ha mgbe ha na-abanye ụlọ alakụba. Anaghị anabata uwe n'obe ma nwee ike ijide gị n'aka ndị ọchịchị. A machibidoro ụdị ịgba ọtọ ọ bụla iwu nke ọma, gụnyere ịwụ anyanwụ na-enweghị oke. O kwesịghị ekwesị ka ndị ikom na-aga n'okporo ámá ma ọ bụ ụlọ ahịa na-agba akwụna.
Mmegharị – Atụla onye ọ bụla mkpịsị aka, a na-ahụ ya dị ka mkparị. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji aka gị mee mmegharị ahụ, jiri aka gị dum tụọ aka na ntụzịaka. Mmegharị aka rụrụ arụ n'ihu ọha nwere ike ijide gị. Zere igosi ọbụ ụkwụ gị ma ọ bụ na-agafe ụkwụ gị karịsịa n'ihu ndị ọbịa dị mkpa.
mmanya – Mba ahụ nwere amụma enweghị ndidi maka ịnya ụgbọ ala mmanya. Ịṅụbiga mmanya ókè na ịkpa àgwà ọjọọ mgbe ịṅụbiga mmanya ókè n'ihu ọha bụ ihe a na-anabataghị, nke a nwere ike ịkpata nra ma ọ bụ ka njọ. A machibidoro mmanya na-aba n'anya na ihe ndị ọzọ iwu na-akwadoghị n'ihu ọha. Enwere ọtụtụ ebe na Dubai ebe mmadụ nwere ike ịṅụ mmanya. Kụta ụlọ mmanya ma ọ bụ ụlọ mmanya, ọ ga-eju gị anya maka ụdị mmanya dị iche iche a na-enye.
Photography – Na-eche nche mgbe ị na-ese foto. Nara ikike mgbe niile tupu ịse foto onye bi na ya UAE ma ọ bụ a UAE mba, okachasi nwanyi.
ekele – Ngosipụta ihu ọha kwesịrị ịdị ntakịrị, ọ dịghị isutu ọnụ ma ọ bụ ịmakụ n'ihu ọha. Ijide aka dị mma. Mgbe ị zutere onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ya bụ onye Alakụba, ekwela aka ọ gwụla ma ha buru ụzọ gbatịa aka ya. Ụmụ nwanyị nwere ike ịhọrọ ịghara ịmanye ndị na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ha aka n'ihi ihe gbasara okpukperechi. Mmegbu mmekọ nwoke na nwanyị ma ọ bụ ịgwa ụmụ nwanyị okwu n'ezoghị ọnụ n'ihu ọha, ma ọ bụ ịse foto ha n'enweghị ikike, bụ nke a kpasuru iwe.
Chebara asusu gi echiche - Mmegharị ahụ doro anya, ọgba aghara mkpọtụ, asụsụ ọjọọ, na enweghị nkwanye ùgwù n'okpukpe Alakụba ma ọ bụ ndị isi. UAE na-amachibidoro. Ha nwere ike bụrụ nsonaazụ iwu sitere na omume ndị a.
Nchịkọta ego - Ịkwalite otu ọrụ ebere maka ọrụ enyemaka ma ọ bụ òtù ọrụ ebere ọ bụla ma ọ bụrụ na emere ya site na usoro iwu na ikike ka a na-ewere na iwu akwadoghị.
Ntugharị ego nlele – A na-ewere nke a dị ka mmejọ. Ọ bụrụ na akwụkwọ nlele ahụ ewepụtara enweghị ego zuru oke, ị nwere ike chere ebubo obodo na mpụ. Ị nwekwara ike ịga mkpọrọ.
Ọnwa Nsọ nke Ramadan– Ndị Alakụba na-ekpe ekpere, na-ebu ọnụ ma na-atụgharị uche n’ime ọnwa a. Mmadụ kwesịrị ịgbaso iwu gọọmenti nyere n’ọnwa ebu ọnụ. Ọtụtụ ndị mmadụ ga-atụ aro ka ị ghara ileta obodo a n'oge Ramadan, rube isi n'iwu na ọbụna oge Ramadan nwere ike ịbụ ọmarịcha ọnụnọ.
A na-ewerekwa ihe ndị a n'ụzọ megidere iwu - iji ma ọ bụ inwe ọgwụ ike, ibikọ ọnụ, mmekọahụ na-abụghị di na nwunye, ịmụ nwa n'alụghị di, ịkwa iko na nwoke idina nwoke.
Otu n'ime ihe mere m ji n'aka na ị na-achọ njem gaa na UAE bụ ịhụ miri emi, ọgaranya akụkọ ihe mere eme na omenala obodo ga-enye. Dubai bụ ngwakọta nke ihe ịtụnanya akụkọ ihe mere eme na nke oge a. Ịga na Dubai bụ ahụmahụ mmadụ ga-eji kpọrọ ihe ruo mgbe ebighị ebi.
Rịba ama: Ozi a kesara n'elu bụ ntuziaka zuru oke maka ileta Dubai. Iji nọrọ na-atọ ụtọ, ọ ga-akacha mma jụọ n'ihu maka ndụmọdụ ụkpụrụ omume dabere na ebe ị gara ma ọ bụ nọrọ na ya UAE.
By eze 21|2022-05-23T17:53:32+05:30December 26th, 2018|blog|Comments Off na nleta Dubai? Mara yays & ee